Sidee ayey duqeyn la'aanta u saameysay howl-gallada ciidamada Soomaaliya? - Caasimada Online
Home Warar Sidee ayey duqeyn la’aanta u saameysay howl-gallada ciidamada Soomaaliya?
Sidee ayey duqeyn la’aanta u saameysay howl-gallada ciidamada Soomaaliya?
Muqdisho (Caasimada Online) – Afhayeenka ciidamada Xoogga dalka Soomaaliyeed Gaashaanle Sare Cali Xaashi Cabdinuur oo wareysi siiyey VOA ayaa ka hadlay howl-gallada ka dhanka ah Al-Shabaab ee ka socda dalka iyo saameynta ciidanka Soomaaliya ay ku yeelatay duqeyn la’aanta, kadib markii Mareykanka uu hakiyey weeraradii cirka.
Xaashi ayaa sheegay in duqeymuhu ay qeyb weyn ka qaadanayeen dagaalka adag ee lagula jiro kooxda Al-Shabaab, wuxuuna shaaciyey in lagu bartilmaameedsan jiray goobaha ay ku dhuumaaleysanayaan xoogaga Al-Shabaab ee aysan geli karin Infantry-gu.
“Marka ciidan Infantry-yahay oo meel ka dagaallamaayo waxaa lagu kabaa horin madaafiic ah, marka waad garan kartaa horinta madaafiicda ah, haddii lagu kabo ururkaas oo macal kunbud u ah madaafiicdiisa waxaan u maleynayaa Shabaab iska daayee xittaa wax kale oo celin karo in aynan jirin,” ayuu hadalkiisa sii raaciyey.
“Haddii dowladaha kaalmeeya ciidamada Xoogga dalka Soomaaliya, haddii ma aragtay taakuleyntaas noo dhammeustiraan waxaa waaye wadanka amnigiisa sida ugu dhaqsiyaha badan ayaa ciidamada Soomaaliya ula wareegi karaan,” ayuu markale yiri.